Kuthetha ukuthini ukwamkela uYesu njengomsindisi wakho buqu?
Umbuzo: Kuthetha ukuthini ukwamkela uYesu njengomsindisi wakho buqu?
Impendulo: Ingaba sele umamkele uYesu Kristu njengomsindisi wakho buqu? Ukuwuqondisisa kakuhle lombuzo, kufuneka kuqala wazi izihloko “Yesu Kristu”, “ubuqu”, “noMsindisi”.
Ngubani uYesu Kristu? Abantu abaninzi bakumazi uYesu Kristu njengendoda elungileyo. Umfundisi omkhulu okanye umprofethi kaThixo. Ezizinto ziyinyaniso ngoYesu, kodwa azimchazi ngokwenyani ukuba ungubani na. Ibhayibhile isichazela ukuba uYesu unguThixo ngokwenyama, uThixo ngokobuntu (jonga uYohane 1:1-14). UThixo weza emhlabeni ezokusifundisa, ezokusiphilisa, ezokusilungisa, ezokusixolela, ---- ezokusifela! UYesu Kristu nguThixo, nguMdali,yiNkosi ezizinto zonke. Sele umamkele lo Yesu?